1,500 Zvinyorwa! Kuenda kuSocial Media Kudzora! | Martech Zone
Ini ndanga ndichishandisa iyo Internet Archive Wayback Machine manheru ano kuyedza kuratidza kana ini zviri pamutemo akatanga kublogi. Ini ndaive ndanonoka kubhururuka ndichienzaniswa nevaya mabloggi avo vakatanga kublogi painenge ichidaidzwa journaling.
Yangu yekutanga blogging yakaitika pa Ryze neNewspaper Database Yekushambadzira boka (ini handina chokwadi kana Ryze yakave nekukwiridzira kubvira 2005!). Ndakabva ndafambisa ndichienda Blogger ndokutanga kunyora Rudzi rwaDoug.
The yekutanga blog post pane yangu yakachengetwa WordPress blog yakanga iri pamusoro peGomo Dew ichizvishambadza pachayo sekudya kwekuseni kunditora. Kushambadzira ikoko kunofanira kukurudzira chero munhu kuti atange blog!
Sezvo ini ndichitarisa kumashure kune vanhu vanga vachi blogga tsime pamusoro a makumi gumi, zvinoshamisa kuti ini ndawana zviga zvandinazvo pane ino saiti muhupenyu hwayo hupfupi:
Martech Zone yaigara iri mumabhuku epamusoro zviuru zvishanu pa Technorati.
Martech Zone yakanga iri mune Simba 150 Yekushambadzira Blogs pawebhu.
Martech Zone inoenderera kuve iri pamusoro soro 100,000 mawebhusaiti pane Alexa.
Pamusoro pevanhu mazana mana ezviuru vashanyira blog yangu.
Vanopfuura makumi mana muzana evashanyi vangu vatsva vanosvika pano kubva Google.
Ini ndichaenderera mberi nekudzidzisa vanhu maitiro ekugadzira, kusanganisa, uye kuwana zvakanakisa kubva kune yavo yekushambadzira tekinoroji ine yakashomeka kuyedza.
Tags: doug's rantmangani mablog blogpane simba uye otomatikisocial media kutongawayback muchina
Iyo 2009 Email Kushambadzira Benchmark Nongedzo